Momba anay - Toptag Technology Co., Ltd.
Shenzhen TopTag Technology Co., Ltd dia natsangana tamin'ny taona 2008 miaraka amina birao lehibe roa any Hong Kong sy Shenzhen, Sina. TopTag dia natsangan'ny vondron'olona liana sy mamorona manana traikefa amin'ny varotra RFID sy fananganana.
TopTag dia misahana manokana amin'ny marika RFID isan-karazany sy marika misy endrika sy fitaovana samihafa. Ny tenifototra anay dia manomboka amin'ny ambany matetika ka hatrany amin'ny haavo avo lenta, izay be mpampiasa amin'ny NFC Field, Mobile Payment, Access Control, fitantanana rojoboky ny fitantanana, fitantanana lisitra, fitantanana fitehirizana & lojika, fitantanana biby fiompy sns. Izahay koa dia manana tsipika manokana amin'ny vokatra fanakanana RFID, ao anatin'izany ny fampiasa amin'ny karatra fanakanana RFID, karatra fanakanana RFID, paosy fanakanana signal sns
TopTag dia tsy hoe misy R&D, fanamboarana, varotra fotsiny fa manome serivisy sy fanohanana ara-teknika. Ny serivisy namboarina dia misy ho an'ny mpanjifanay mba hanamboarany ny mari-pamantarana sy ny marika momba ny asany, ny endriny ary ny fitaovany.
Ny tanjakay lehibe dia
Azontsika atao ny manamboatra marika manokana sy mora indrindra ary endriny, habe na habe hafa.
5 Andalana matihanina mba hiantohana ny kalitao avo lenta sy ny fahaizany lehibe ary ny fotoana fitarihana fohy indrindra.
Ampiasao tanteraka ny tombony azo avy amin'ny ozinina samihafa mba hanomezana ny vokatra tsara indrindra amin'ny vidiny mirary indrindra.
Fanohanana Teknisiana matihanina sy ekipa mpivarotra mahomby indrindra.
Ny fahombiazan'ny mpanjifa dia ny fahombiazantsika, noho izany ny serivisy ho an'ny mpanjifa tsara indrindra.